I-SPC ivuselela ngohlobo lwayo olunomkhawulo olwenzelwe i-El Dios de los Tres | Izindaba zamagajethi
I-SPC ivuselela ngohlobo lwayo olunomkhawulo olwenzelwe i-El Dios de los Tres
UMiguel Hernandez | | Imicimbi, General
I-SPC iyaqhubeka nesifiso sayo sokwenza intando yeningi ibe ngeyentando yeningi, inkampani igembula emcimbini wayo eMadrid ukwenza okukhethekile kunoma ngubani. Sibonile ukwakheka kwezandla lapho imikhiqizo emithathu yakudala ye-SPC manje ibukeka ingcono kunakuqala. I-strador idlulisela indawo yayo yokudala ezintweni ezintathu ezintsha ze-SPC, ithebhulethi Izulu 10.1, iSpika Somlomo kanye ne-smartwatch yeSmartee Circle.
Leli qoqo elisha le-SPC ngokubambisana ne-El Dios De Los Tres liphefumulelwe isitayela Isikole esidala futhi imifanekiso ifaka imibala ecacile nokudlala okungokomfanekiso.
UJavier Navarro, umculi wase-Almeria ozinze eBarcelona ngemuva kwe-El Dios De Los Tres, ugqame ngomsebenzi wakhe owahlukahlukene futhi ukwazile ukuzibeka njengomunye wababonisi abasafufusa nabasebenza ngezindlela ezehlukene enkundleni kazwelonke. Yena ngokwakhe uchaza umsebenzi wakhe njengokuziphendukela kwemvelo kanye nocwaningo, lapho ethola khona amathonya edolobheni lakubo - i-Almería–, umculo awulalelayo noma abantu azungeze nabo. Kusuka kumathonya we ubuciko basemgwaqweniNgisho nesayensi yemvelo nezimpawu, umbhali ukwazile ukuba njenge-chameleonic ngangokunokwenzeka emsebenzini womuntu siqu.
Ukuqala esinakho Izulu 10.1 tablet eyenzelwe i-El Dios De Los Tres izotholakala ngomthamo we-16 GB, i-Quad Core Cortex A53 ku-1.3 GHz, i-Dual Core Mali 4000MP2 ihluzo ne-2 GB RAM; kanye nebhethri le-lithium le-5.000 mAh kanye nezici zakudala. Futhi okungezwe kulolu hlobo olukhawulelwe yi- Isipikha seSphere lokho kunamahora ayisishiyagalombili okuzimela kanye nomsindo onamandla ngenxa yoxhumano lwayo lwe-Bluetooth 4.1
I-smartwatch nayo iza kulolu hlobo olukhawulelwe Umbuthano weSmartee ihlanganisa ukusebenza, umbala, emisha kanye nobuntu ngokugqokekayo okufanayo. Lokhu kugqokekayo kulawula ukusebenza komzimba futhi kuthola zonke izaziso ezivela ku-imeyili, izinhlelo zokusebenza zemiyalezo kanye nokuxhumana nabantu, kanye nokukwazi ukuphatha izingcingo ezingenayo.
Intengo ye-edishini ekhawulelwe nokutholakala
The SPC Heaven 10. 1 ithebhulethi iyatholakala ngentengo yama-euro angu-129.
Isikhulumi seSphere esivela ku-SPC Itholakala ngentengo yama-euro angama-49,90.
I-smartwatch yombuthano we-SPC Itholakala ngentengo yama-euro angama-99,90.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-SPC ivuselela ngohlobo lwayo olunomkhawulo olwenzelwe i-El Dios de los Tres
I-Star Wars: I-Jedi Yokugcina, Umbono Wethu kanye Nombono "Wokunethezeka"
Sihlaziya i-Amazon Fire Stick TV, enye indlela enentshisekelo kune-Chromecast